ထရမ့်ရဲ့ လေတပ်စစ်ဦးစီးချုပ်ကတော့ တရုတ်၊ ရုရှားနဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ စစ်ပွဲတွေအတွက် ကြိုပြင်ထားဖို့ ပြောပြီ….( နောက်ဆုံးတော့ အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်က စစ်ပွဲအတွင်ပြင်ဆင်ပါပြီ ) – Android App Zone
ထရမ့်ရဲ့ လေတပ်စစ်ဦးစီးချုပ်ကတော့ တရုတ်၊ ရုရှားနဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ စစ်ပွဲတွေအတွက် ကြိုပြင်ထားဖို့ ပြောပြီ….( နောက်ဆုံးတော့ အမေရိကန်ကိုယ်တိုင်က စစ်ပွဲအတွင်ပြင်ဆင်ပါပြီ )
အမေရိကန်အစိုးရဟာ ရုရှား၊ တရုတ်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည့်စစ်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို စတင်သင့်သည်ဟု ဆိုသည်။၎င်းစကားကို အမေရိကန်လေတပ်ဦးစီးချုပ် Charles Brown မှ တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပဋိပက္ခများကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်ဟု ကာကွယ်ရေးသတင်းမဂ္ဂဇင်းကပြောကြားခဲ့သည်။
ဘရောင်း၏အဆိုအရ ယူအက်စ်စစ်တပ်၏ဦးဆောင်မှုသည် အနာဂတ်စစ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ လုံလောက်မှုတော့ မရှိဘူး။ အနိုင်ရရန် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ ၎င်း၏အရင်းအမြစ်များကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနည်းပညာအသစ်များအတွက် တီထွင်ရန်အာရုံစိုက်ရမည်။ ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲက စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် လိုအပ်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုစာရင်းကိုတင်ပြရန် ရည်ရွယ်တာပါ။
ဘရောင်းဟာ ဇွန်လတွင် လေတပ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၁၉၈၉ မှ ၁၉၉၃ အတွင်းဥက္ကဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော Colin Powell မှစ၍ ပထမဆုံးဝန်ထမ်းသောအာဖရိကန်အမေရိကန်နှင့်ပထမဆုံးအာဖရိကန်အမေရိကန်ဝန်ထမ်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
CRD-myanmar fb society🇲🇲
ထရမျ့ရဲ့ လတေပျစဈဦးစီးခြုပျကတော့ တရုတျ၊ ရုရှားနဲ့ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ စဈပှဲတှအေတှကျ ကွိုပွငျထားဖို့ ပွောပွီ….( နောကျဆုံးတော့ အမရေိကနျကိုယျတိုငျက စဈပှဲအတှငျပွငျဆငျပါပွီ )
အမရေိကနျအစိုးရဟာ ရုရှား၊ တရုတျနှငျ့ဖွဈနိုငျသညျ့စဈပှဲအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုမြားကို စတငျသငျ့သညျဟု ဆိုသညျ။၎င်းငျးစကားကို အမရေိကနျလတေပျဦးစီးခြုပျ Charles Brown မှ တငျပွခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ဖွဈနိုငျခရြှေိသောပဋိပက်ခမြားကို ဒုတိယကမ်ဘာစဈနှငျ့နှိုငျးယှဉျနိုငျသညျဟု ကာကှယျရေးသတငျးမဂ်ဂဇငျးကပွောကွားခဲ့သညျ။
ဘရောငျး၏အဆိုအရ ယူအကျဈစဈတပျ၏ဦးဆောငျမှုသညျ အနာဂတျစဈပှဲနှငျ့ပတျသကျ၍ လုံလောကျမှုတော့ မရှိဘူး။ အနိုငျရရနျ နိုငျငံတဈနိုငျငံဟာ ၎င်းငျး၏အရငျးအမွဈမြားကိုဖှံ့ဖွိုးပွီးနညျးပညာအသဈမြားအတှကျ တီထှငျရနျအာရုံစိုကျရမညျ။ ဝနျထမျးအကွီးအကဲက စကျတငျဘာ ၁၄ ရကျ တနင်ျလာနတှေ့ငျ လိုအပျသောအရေးယူဆောငျရှကျမှုစာရငျးကိုတငျပွရနျ ရညျရှယျတာပါ။
ဘရောငျးဟာ ဇှနျလတှငျ လတေပျဦးစီးခြုပျအဖွဈတာဝနျယူခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ၁၉၈၉ မှ ၁၉၉၃ အတှငျးဥက်ကဌအဖွဈတာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သော Colin Powell မှစ၍ ပထမဆုံးဝနျထမျးသောအာဖရိကနျအမရေိကနျနှငျ့ပထမဆုံးအာဖရိကနျအမရေိကနျဝနျထမျး ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
CRD-myanmar fb society
လိငျအင်ျဂါခှဲစိတျထားတဲ့ မြိုးကိုကိုစနျးရဲ့ အရငျနဲ့မတူ ပွောငျးလဲလှပလာမှု
Rebel Khiladill Love 2019